မကောင်းသော အတတ် ပညာ အတိုက် အခိုက် များရန်များ မှ ကင်းဝေးရအောင် ပြုလုပ်နည်း – Zartiman
မကောင်းသော အတတ် ပညာ အတိုက် အခိုက် များရန်များ မှ ကင်းဝေးရအောင် ပြုလုပ်နည်း
Zar Ti Man | July 17, 2020 | Knowledge | No Comments
တစ်စုံတစ်ယောက်၏ ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် နေအိမ် ၊ ခြံဝန်း ၊ တိုက်ခန်း ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ရုံးခန်း ၊ လုပ်ငန်း ၊ အလုပ်ရုံ ၊ ယဉ်ကား များ မသန့်မရှင်းဖြစ်နေလျှင်သော်၎င်း … ။စုန်းတိုက် ၊ နတ်တိုက် ၊ အောက်လမ်းအတတ် ၊ အင်းအတတ် ၊ မှော်အတတ် စသည့် မကောင်းသောအတတ်ပညာများဖြင့် ပြုစားစီရင် တိုက်ခိုက်ခြင်းရန်မှ အကာအကွယ်ရစေရန်အတွက် … ။
တိုက်ခိုက်ခံနေရသော အတိုက်အခိုက်အန္တရာယ်များ ၊ မကောင်းသောအတတ်ပညာများ အာနိသင်ပျယ်သွားစေရန်အတွက်၎င်း ။ မိတ် ဆွေတို့ကိုသော်၎င်း ၊ မိတ်ဆွေတို့၏မိသားစုများကိုသော်၎င်း ၊ မိတ်ဆွေတို့၏ နေအိမ် ၊ ခြံဝန်း ၊ တိုက်ခန်း ၊ ဈေးဆိုင် ၊ ရုံးခန်း ၊ လုပ်ငန်း ၊ အလုပ်ရုံ ၊ ယဉ်ကား စသည်တို့ကို … ။အတိုက်အခံအပြိုင်အဆိုင်များကသော်၎င်း ၊ မနာလိုမုန်းတီးသူများကသော်၎င်း ။
မကောင်းသောအတတ်ပညာများနှင့် ပြုစားစီရင် နှောက်ယှက်ခံနေရလျှင်သော်၎င်း ၊ သံသယဖြစ်နေလျှင်သော်၎င်း …. ။အခြားသောပုံစံ အမျိုးမျိုးဖြင့် နှောက်ယှက်တိုက်ခိုက်နေလျှင် သော်၎င်း …. ။ကျွန်ုပ်တုိ့လက်တွေ့အသုံးချနေတဲ့ ၊ ရှေးဆရာအစဉ်အဆက် လက်ဆင့်ကမ်း အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ .. ဂမ္ဘီရယတြာနည်းတစ်ခု လက်ဆောင်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် … ။
မြေစလောင်းဖုံး သန့်သန့် တစ်ချပ်ထဲကို ထုံးအနည်းငယ်ထည့်ပါ။မြေဖြင့်ပြုလုပ်သော စလောင်းဖုံးဖြစ်မည်။ ( တခြားသော စတီး ၊ သံ ၊ ဒန် စလောင်းဖုံးများမရပါ)သကြားအနည်းငယ်ထည့်ပါ။ရေအနည်းငယ် ထပ်ထည့်ပါ။လက်ခလယ်ဖြင့်မွှေပါ…။ အတွင်းဘက်တွေကို ပျံ့ သွား အောင် သုတ်ပါ။၎င်းမြေစလောင်းဖုံးကို ဧည့်ခန်း ၊ အလုပ်စားပွဲ ၊ ရုံးခန်းစားပွဲ ၊ ဆိုင်ကောင်တာပေါ်(မည်သည့်နေရာတွင်မဆို) တင်ပါ ….။
မြေစလောင်းဖုံး ခလယ်ကအခွက်ထဲတွင် ဖယောင်းတိုင်ထွန်းပေးခြင်းအားဖြင့် အတိုက်အခိုက်များရန်မှသော်၎င်း ၊ မကောင်းသောအတတ် ပညာများဖြင့် ပြုစားစီရင် နှောက်ယှက်ခြင်း ဘေးရန်မှေသော်၎င်း အကာအကွယ်ရစေပါတယ် … ။ တန်ပြန်ဖြစ်စေပါတယ်။ နှောက်ယှက် နေဆဲဖြစ်တဲ့ အတိုက်အခိုက်များလည်း အာနိသင် ပျယ်ပျက်သွားစေပါတယ် … ။
မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင် တိုက်ခိုက်ခံရေလျှင် မြေစလောင်းဖုံး၏အောက်၌ မိတ်ဆွေ၏ဓာတ်ပုံ ခံပြီး ထွန်းပါ။ိသားစုလိုက် တိုက်ခိုက်ခံနေရလျှင် မြေစလောင်းဖုံးအောက်တွင် မိသားစုဓာတ်ပုံခံထွန်းပါ ။မိတ်ဆွေများ အရေးကြုံလျှင် သုံးနိုင်ကြပါစေသော်ဝ်။ မိတ်ဆွေတို့၏ ကောင်းကျိုး များကို အစဉ်လိုလားသော။
မင်းသိမ်းခိုင် – ရွှေရမ်းထူးလင်း
တဈစုံတဈယောကျ၏ ရညျရှယျခကျြမရှိသျောလညျး အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ နအေိမျ ၊ ခွံဝနျး ၊ တိုကျခနျး ၊ ဈေးဆိုငျ ၊ ရုံးခနျး ၊ လုပျငနျး ၊ အလုပျရုံ ၊ ယဉျကား မြား မသနျ့မရှငျးဖွဈနလြှေငျသျော၎င်းငျး … ။စုနျးတိုကျ ၊ နတျတိုကျ ၊ အောကျလမျးအတတျ ၊ အငျးအတတျ ၊ မှျောအတတျ စသညျ့ မကောငျးသောအတတျပညာမြားဖွငျ့ ပွုစားစီရငျ တိုကျခိုကျခွငျးရနျမှ အကာအကှယျရစရေနျအတှကျ … ။
တိုကျခိုကျခံနရေသော အတိုကျအခိုကျအန်တရာယျမြား ၊ မကောငျးသောအတတျပညာမြား အာနိသငျပယျြသှားစရေနျအတှကျ၎င်းငျး ။ မိတျ ဆှတေို့ကိုသျော၎င်းငျး ၊ မိတျဆှတေို့၏မိသားစုမြားကိုသျော၎င်းငျး ၊ မိတျဆှတေို့၏ နအေိမျ ၊ ခွံဝနျး ၊ တိုကျခနျး ၊ ဈေးဆိုငျ ၊ ရုံးခနျး ၊ လုပျငနျး ၊ အလုပျရုံ ၊ ယဉျကား စသညျတို့ကို … ။အတိုကျအခံအပွိုငျအဆိုငျမြားကသျော၎င်းငျး ၊ မနာလိုမုနျးတီးသူမြားကသျော၎င်းငျး ။
မကောငျးသောအတတျပညာမြားနှငျ့ ပွုစားစီရငျ နှောကျယှကျခံနရေလြှငျသျော၎င်းငျး ၊ သံသယဖွဈနလြှေငျသျော၎င်းငျး …. ။အခွားသောပုံစံ အမြိုးမြိုးဖွငျ့ နှောကျယှကျတိုကျခိုကျနလြှေငျ သျော၎င်းငျး …. ။ကြှနျုပျတုိ့လကျတှအေ့သုံးခနြတေဲ့ ၊ ရှေးဆရာအစဉျအဆကျ လကျဆငျ့ကမျး အသုံးပွုလာခဲ့တဲ့ .. ဂမ်ဘီရယတွာနညျးတဈခု လကျဆောငျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ … ။
မွစေလောငျးဖုံး သနျ့သနျ့ တဈခပျြထဲကို ထုံးအနညျးငယျထညျ့ပါ။မွဖွေငျ့ပွုလုပျသော စလောငျးဖုံးဖွဈမညျ။ ( တခွားသော စတီး ၊ သံ ၊ ဒနျ စလောငျးဖုံးမြားမရပါ)သကွားအနညျးငယျထညျ့ပါ။ရအေနညျးငယျ ထပျထညျ့ပါ။လကျခလယျဖွငျ့မှပေါ…။ အတှငျးဘကျတှကေို ပြံ့ သှား အောငျ သုတျပါ။၎င်းငျးမွစေလောငျးဖုံးကို ဧညျ့ခနျး ၊ အလုပျစားပှဲ ၊ ရုံးခနျးစားပှဲ ၊ ဆိုငျကောငျတာပျေါ(မညျသညျ့နရောတှငျမဆို) တငျပါ ….။
မွစေလောငျးဖုံး ခလယျကအခှကျထဲတှငျ ဖယောငျးတိုငျထှနျးပေးခွငျးအားဖွငျ့ အတိုကျအခိုကျမြားရနျမှသျော၎င်းငျး ၊ မကောငျးသောအတတျ ပညာမြားဖွငျ့ ပွုစားစီရငျ နှောကျယှကျခွငျး ဘေးရနျမှသေျော၎င်းငျး အကာအကှယျရစပေါတယျ … ။ တနျပွနျဖွဈစပေါတယျ။ နှောကျယှကျ နဆေဲဖွဈတဲ့ အတိုကျအခိုကျမြားလညျး အာနိသငျ ပယျြပကျြသှားစပေါတယျ … ။
မိတျဆှကေိုယျတိုငျ တိုကျခိုကျခံရလြှေငျ မွစေလောငျးဖုံး၏အောကျ၌ မိတျဆှေ၏ဓာတျပုံ ခံပွီး ထှနျးပါ။ိသားစုလိုကျ တိုကျခိုကျခံနရေလြှငျ မွစေလောငျးဖုံးအောကျတှငျ မိသားစုဓာတျပုံခံထှနျးပါ ။မိတျဆှမြေား အရေးကွုံလြှငျ သုံးနိုငျကွပါစသေျောဝျ။ မိတျဆှတေို့၏ ကောငျးကြိုး မြားကို အစဉျလိုလားသော။
(၃)လသာ ခံတော့မယ့် ဆရာတော်ကြီး သက်တော် (၉၀) အထိ လက်ရှိနေထိုင်နေသော အံဖွယ်အသဲ ကင်ဆာ ပျောက်ဆေး
ဖုန်းအားသွင်းတာ နဲ့ ပတ်သက်လို့ အမြဲတမ်းလုပ်တတ်မိကြ တဲ့ အမှား အယွင်းများ သိထားသင့်
ထွက်ရာပေါက်ပုဂ္ဂိုလ် အဘအောင်မင်းခေါင် ပုပ္ပားတောင်ပေါ်မှာရေး ခဲ့ တဲ့ “ပတ်ဆော် ကာ ကပ်ကျော်မယ့် ကိန်း” တဘောင်